Isikhungo Somlando - Igumbi le-Casarão da Fonte 2 - I-Airbnb
Isikhungo Somlando - Igumbi le-Casarão da Fonte 2
São Luís, Maranhão, i-Brazil
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Chrislene
U-Chrislene Ungumbungazi ovelele
Indlu elula futhi ekhululekile.
I-Casarão da Fonte isesikhungweni Somlando sase-São Luís eduze ne-Fonte do Ribeirão. Indawo yinhle kakhulu ngoba iseduze nezindawo eziningi nomlando wedolobha njengeSigodlo, isonto leKathedral, i-Arthur Azevedo Theatre, Amamnyuziyamu...
Phakathi nosuku ungasebenzisa ngokunenzuzo izitaladi nemibukiso ejabulisayo. Ngokuhlwa, ungajabulela imicimbi yamasiko e-Fonte do Ribeirão.
Inkundla yokuthatha isikebhe ukuvakashela i-Alcântara nesiteshi sebhasi ukuya ebhishi yimizuzu emihlanu yokuhamba ukusuka endlini.
Indlu inengadi eshisayo enendawo yokubhukuda futhi ine-Wi-Fi yamahhala. Ikamelo linombhede omkhulu, umbhede olala umuntu oyedwa, isiphephethamoya negumbi lokugezela langasese elinamanzi ashisayo.
Le Casarão da Fonte itholakala dans le center historique de São Luís près de la Fontaine du Riberâo.
Phakathi nosuku, indawo yayo yenza kube lula ukuvakashela izindawo eziningi zezivakashi nezomlando zase-São Luis (i-Palácio dos leões, i-Cathedral, i-Arthur Azevedo Theatre, iminyuziyamu...), ukuhambahamba emigwaqweni yedolobha elidala futhi unambithe imigwaqo ejabulisayo yezitolo nezimakethe.
Ngokuhlwa, ungajabulela imicimbi yamasiko nomculo e-Fontaine du Riberão.
I-quay yokuthatha i-chooner ukuya e-Alcântara kanye nesiteshi sebhasi ukuya ebhishi yimizuzu engu-5 yokuhamba ngezinyawo ukusuka e-Casarão.
I-pousada inengadi eshisayo enendawo yokubhukuda futhi inikeza ukufinyelela kwe-inthanethi kwe-Wi-Fi kwamahhala.
Ikamelo linombhede omkhulu olala abantu ababili, umbhede olala umuntu oyedwa, isiphephethamoya futhi linegumbi lokugezela langasese elinamanzi ashisayo.
I-Casarão da Fonte isenkabeni engokomlando ye-São Luís, eduze nemidlalo yaseshashalazini nemizuzu emihlanu ukusuka esontweni le-Sé.
Phakathi nosuku, izindawo zomlando nezindawo zokuheha izivakashi ziphakathi kokuhamba okulula (Palácio dos leões, Cathedrale, Arthur Azevedo theater, amamyuziyamu...). Emnyango wakho kukhona izindawo zokuzilibazisa ezihlola imizila emincane yedolobha elidala, ukuvakashela izimakethe zendawo nokuthenga eceleni kwe-Rua Grande ematasa.
Ebusuku, imicimbi yamasiko nomculo iba khona e-Riberão Fountain.
Kusuka e-Casarão da Fonte, izikebhe ze-Alcantara namabhasi ziya ebhishi yindlela yemizuzu eyishumi.
I-pousada isengadini yayo esenkabazwe enendawo yokubhukuda; i-Wi-Fi yamahhala emagcekeni.
Ikamelo linombhede omkhulu, umbhede olala umuntu oyedwa, isiphephethamoya kanye negumbi lokugezela langasese elinamanzi ashisayo.
UChrislene Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- São Luís namaphethelo